2009-07-19 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
HJSplit ​ဖြင့် ​ဖိုင်​ဖြေ​နည်း ..
​ကဲ ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး Program ​ကို ​အ​ရင် Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ဦး . ​အ​ရင်​က ​ဒီ​ပို့စ်​မှာ ​တင်​ထား​ပေး ​ပါ​တယ် . Download ​လုပ်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​ကို​ဖြေ​မယ့်​ဖိုင်​တွေ​ကို ​တစ်​နေ​ရာ​တည်း​မှာ ​စု​ထား​လိုက်​ပါ .. ​ပုံ​နှင့် ​တစ်​ပုံ​ချင်း​စီ ​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​ပုံ​သေး​နေ​ရင် ​က​လစ် ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​ပုံ​ကြီး ​ထွက်​လာ​ပါ ​လိမ့်​မယ် .. Hj split ​ဟာ ​ဖိုင်​ခွဲ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​ပါ. win rar ​တို့ win zip ​တို့​က ​ဖိုင်​ခွဲ​ပြီး ​ပြန်​ပေါင်း​တဲ့ ​အ​ချိန်​မှာ error ​တက်​တတ်​ပါ​တယ်. hj split ​မှာ​တော့ ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်.